Cinwaanka 1 - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Title I waa barnaamij ay maalgeliso dowladda federaalku oo qayb ka ah Sharciga Ku-guuleysiga Arday kasta (ESSA). Ujeedada sharcigan ayaa ah in la siiyo fursado dheeri ah carruurta halgameysa si ay ula kulmaan rajooyinka heerka fasal ee lagu qeexay Heerarka Tacliinta ee Minnesota.
Dugsiyada ay ugu yaraan 40% ardayda u qalmaan cuntada bilaashka ah iyo qiimaha jaban waxay noqon karaan iskuulada Cinwaanka I ee Iskuulka oo dhan. Waxaa looga baahan yahay inay qoraan yoolalka sanadlaha ah si wax looga qabto baahiyaha gaarka ah ee dugsiga. Iyada oo loo marayo qaabkan, ilaha Cinwaanka I waxaa loo isticmaali karaa in looga faa'iideysto dhammaan ardayda dugsiga, laakiin gaar ahaan baahiyaha waxbarasho ee carruurta ugu hooseysa ee ku guuleysaneysa. Macallimiinta, qoysaska iyo ardayda dhammaantood waxay door ka ciyaaraan iskuul isku imaatinkiisa ah himilooyinkiisa Iskuulka oo dhan.
Magaca 1aad Ergada
Cinwaanka I wuxuu taageerayaa himilada degmada iyadoo abuureysa fursado waxbarasho oo loogu talagalay carruurta si ay u bartaan aqoonta iyo xirfadaha ku jira heerarka caqabadda leh ee heerarka gobolka ee akhriska iyo xisaabta.
Yoolalka Cinwaanka I
Si loo siiyo taageero ardayda la kulanka heerarka gobolka ee akhriska iyo xisaabta
Si loogu kabo akhriska fasalka iyo barashada xisaabta
In waalidiinta laga qeyb geliyo waxbarashada ilmahooda sida ugu macquulsan
Sidee loo adeegsadaa lacagaha?
Shaqaalaha taageerada dheeraadka ah si ay ula shaqeeyaan ardayda halgamaya
Kheyraadka / qalabka
Dhacdooyinka Kaqeybgalka Qoyska
Cinwaanka 1 Buug-yaraha - Ingiriisi
Cinwaanka 1 Buug-yaraha - Isbaanish
Cinwaanka 1 Buug-yaraha - Soomaali
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay bixiyaan adeegyo Title I ah: Dugsiga Hoose ee Forest, Dugsiga Hoose Lakeview, Dugsiga Hoose ee Meadow Lake, Neill Elementary, Noble Elementary, Northport Elementary, Sonnesyn Elementary, Sacred Heart Catholic School iyo St. Raphael Catholic School.
Qorshayaasha Horumarinta Dugsiga
Fadlan ogow, dukumiintiyadan waxay u furi doonaan sidii PDF-yada.